FAQs - Jiangsu Senwei इलेक्ट्रॉनिक्स कं, लिमिटेड
डाटा अधिग्रहण एकाई
3 चरण 4wire ऊर्जा मीटर
3 चरण 4wire ऊर्जा मीटर (आईसी कार्ड)
3 चरण 4wire ऊर्जा मीटर meter रिमोट）
एकल चरण दीन रेल उर्जा मीटर （छात्रावास）
एकल चरण दीन रेल उर्जा मीटर आईसी कार्ड)
एकल चरण दीन रेल उर्जा मीटर （रिमोट）
इम्बेडेड बहु-समारोह इलेक्ट्रॉनिक उर्जा मीटर
तीन चरण एलसीडी इम्बेडेड डिजिटल डिस्प्ले मल्टि-फंक्शन इलेक्ट्रोनिक ऊर्जा मीटर मीटरको साथ rs485
इलेक्ट्रिक उर्जा दक्षता अनुगमन टर्मिनल (gprs.lora)
इलेक्ट्रिक उर्जा दक्षता अनुगमन टर्मिनल (channels च्यानल)
Multifunction इलेक्ट्रिक मीटर
एकल चरण बहु-समारोह इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर
एकल चरण सरल बहु-समारोह इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर
तीन चरण बहु-समारोह इलेक्ट्रॉनिक उर्जा मीटर
3 चरण 4wire प्रीपेड ऊर्जा मीटर (आईसी कार्ड)
3 चरण 4wire प्रीपेड ऊर्जा मीटर (रिमोट)
3 चरण प्रीपेड ऊर्जा मीटर (आईसी कार्ड)
एकल चरण इलेक्ट्रॉनिक उर्जा मीटर （आईसी कार्ड + मोड्युल）
एकल चरण इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर （आईसी कार्ड）
एकल चरण उर्जा मीटर （रिमोट + मोड्युल）
एकल चरण उर्जा मीटर （रिमोट）
एकल चरण प्रीपेड उर्जा मीटर （आईसी कार्ड）
एकल चरण इलेक्ट्रॉनिक उर्जा मीटर
तीन चरण इलेक्ट्रॉनिक उर्जा मीटर
तीन चरण इलेक्ट्रोनिक उर्जा मीटर （क्यारियर, लोरा, gprs）
आईसी कार्ड पूर्व-भुक्तान गरिएको पानी मिटर आईसी
स्मार्ट रिमोट वाटर मीटर
के तपाइँ सीधा निर्माता र चीनबाट निर्यातकर्ता हुनुहुन्छ?
हो, हामी छौं। हामी स्थानीय OEM र ODM निर्माता हौं, हाम्रो आफ्नै कारखाना र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विभाग छ।
तपाईको कारखाना कहाँ छ?
हाम्रो कारखाना Yixing शहर, Jiangsu प्रान्त, चीन मा रेखांकित गर्दछ। यो शंघाई एयरपोर्टबाट हाम्रो शहरको लागि द्रुत ट्रेनको लागी २ घण्टा लाग्छ। तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कारखाना कुनै पनी भ्रमण गर्न।
म कसरी तपाईंको सामानहरू खरीद गर्छु?
कृपया हामीलाई तपाईंको जिज्ञासाहरू (विशिष्टता, चित्र, अनुप्रयोग) अलीबाबा, इ-मेल, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै तपाईले हामीलाई आफ्नो आवश्यकताको बारेमा सिधा कल दिन सक्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई ASAP जवाफ दिनेछौं।
नेतृत्व समय कति हो?
यो २ sample--30० दिनहरू लिन सक्दछ नमूना पुष्टि भएपछि र जम्मा भए। यदि तपाईंलाई तत्काल सामानहरू आवश्यक छ भने, कृपया हामीलाई भन्नुहोस्, र हामी तपाईंलाई प्राथमिकता दिन सक्दो कोशिश गर्नेछौं।
म कसरी तपाइँबाट एक नमूना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
यदि हामीसँग तपाईंलाई आवश्यक मोडेलहरूको लागि स्टक छ भने हामी तपाईंलाई सिधा नमूना नि: शुल्क पठाउन सक्छौं। तर यदि तपाईंलाई CUSTOMIZATION आवश्यक छ भने, नमूना लागत लिइनेछ। र दुबै तरिकाहरूका लागि भाडा तपाईले तिर्नु पर्छ। नमूनाहरू फेडेक्स, यूपीएस, टीएनटी, डीएचएल, ect मार्फत पठाउन सकिन्छ।
सामूहिक उत्पादन वस्तुहरूको लागि, तपाईंले उत्पादन अघि %०% जम्मा र ढुवानीमा %०% ब्यालेन्स तिर्न आवश्यक छ। साझा तरीका अगाडि T / T हो। L / C, DP को माध्यमबाट शेष रकम पनि स्वीकार्य हुन्छ।
के म डेलिभरी गर्नु अघि मालको गुणस्तर जाँच्न सक्छु?
हो, या त तपाईं वा तपाईंको कम्पनीका सहकर्मीहरू, वा एक तेस्रो पक्ष हाम्रो कारखानामा डेलिभरी अघि स्वागत गर्न स्वागत छ।
मलाई सामान कसरी वितरण गरिन्छ?
थोरै परिमाणको लागि, हामी कुरियरमार्फत डेलिभर गर्न सल्लाह दिन्छौं, जस्तै फेडेक्स, यूपीएस, डीएचएल, ect।
ठुलो परिमाणका लागि हामी समुद्रीमार्फत जहाजमा जान सल्लाह दिन्छौं। हामी तपाईलाई तोकेको शिपिंग फारवर्डर (एफओबी मूल्य) मा सामान पठाउन सक्दछौं। वा यदि तपाईंसँग एक छैन भने हामी तपाईंलाई CIF मूल्य उद्धृत गर्न सक्छौं।
न। २66, Xincheng Road, Huankeyuan, Yixing, Wuxi, Jiangsu, China